Ma dhabaa in Sheekh Osama Bin Ladin uu gacantiisa isku dilay (Warbixin Xasaasi ah oo Turjuman). | Salaan Media
Ma dhabaa in Sheekh Osama Bin Ladin uu gacantiisa isku dilay (Warbixin Xasaasi ah oo Turjuman).
Sarkaal ka mid ah Saraakiishii ilaalada gaarka u ahaa Hoggaamiyihii hore ee Ururka Al-qacida Osama Bin Ladin, oo Wareysi gaar ah siiyay Webka Gulf News, ayaa waxa uu sheegay in Hoggaamiyihii Geeriyooday uu sababsaday gacantiisa.
Sarkaalka ayaa waxa uu si cad daboolka uga qaaday in Usama Bin Ladin Dhimashadiisa ka hor uu Kharijiyay Laba Askari kamid ahaa Ilaaladiisa kadibna uu gacantiisa isku dilay balse uusan sababsan Weerarkii Maraykanka.
Nabiil Naciim Cabdifitaax, waxa uu Xilli hore ahaa Hoggaame Xisbi islaami oo Jihaadka dadka ugu yeerayey xiriirna la lahaa Al qaacidada Caalamka.
Sarkaalka Wareysiga bixiyay ayaa waxa uu Daboolka ka qaaday Macluumaad qarsoona oo in badan ay dadku is weydiin jireen kaasi oo ahaa in Osama Bin Ladin uu is Kharijiyay halka Dowladda Maraykankana ka sheegatay inay dishay.
Nabeel oo ilaaladiisa ka mid ahaa ayaa waxa uu sheegay inuu yahay ruux marqaati ka ah in Osama Bin Ladin uu isaga is Kharijiyay, balse uusan sababsan Duqeymihii Dowladda Maraykanka ku qaaday Hoodka ay ku sugnaayeen Osama iyo Xulafadiisa.
Deegaanka Abootabad ee Bakistaan ku yaalla oo ahayd meeshii lagu weeraray Shiikh Osama ayaa Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama uu ku sheegay in Bin laden ay ku guuleysteen inay dilaan.
“Bin laden markii weerarka uu dhacayey waxa uu dhexda ku watay suuq waxyaabaha qarxa ku jireen isaga ayaana is dilay’’ sidaa waxa usheegay Gulf News Nabiil Naciim Cabdifitaax oo ilaalada Bin laden ka mid ahaa”.
Wuxuu sheegay Nabiil Naciim Cabdifitaax in dhowr sanno uu Osama xirnaa Suun noociisu ahaa kuwa Qaraxyadda lagu fuliyo, balse Nasiib daro uu Osama markii dambe gacantiisa isku Kharijiyay isagoona cid sababsan.
“Sirdoonada Mareykanka ayaa iyagu doonayey inay qabtaan laakiin uu is qarxiyey isaga ka hor inta aysan meydkiisa dul tagin’’ sidaa waxaa yiri Nabiil Naciim Cabdifitaax”.
Ugu dambeyntii Dowladda Maraykanka ayaa waxa ay iyadu aaminsan tahay in Wadaadka Geeriyooday ee Alqacidad ku baxay Gacanta Dowladda Maraykanka, balse Sarkaalkaasi kamid ahaa ilaalada Osama waxa uu qeexay in Usama uu sababsaday gacantiisa cidna uusan eedsaneynin maalinta Khiyaamo, sida uu cadeeyay Sarkaalkaasi.
Xigasho:- Gulf News
W/T. Weriye Anwar Bakhiit
Madaxa Falanqeynta Siyaasadda